Arụpụtaghị ihe kacha: Otu esi eji ngwa Brain eme ihe omimi? | Site na Linux
Mgbe anyị kwusịrị banyere ọkwa kachasị ọhụrụ na ụzọ ndị nwere ike isi wụnye ihe bara uru ma bara uru emeghe iyi na cross ikpo okwu ngwa oku Inbụrụ, nke na-enye ohere melite arụpụta ọrụ na desktọọpụ nke kọmputa ha, anyị ga-aga n'ihu na nkuzi a gbasara otu esi eji ya.
Ihe niile ka ịkọwa nke ọma ojiji na njikwa nke ụfọdụ kachasị mma ma ọ bụ kacha dị irè plugins na i nwere iji nweta ya ihe mgbaru ọsọ nke ịbawanye arụpụta anyị na kọmputa anyị, karịsịa mgbe ha rụnyere a Free na-emeghe sistemụdị ka GNU / Linux.
Ọ dị mma ịmara nke ahụ Ngwa Brain, ọ bụghị ngwa dị oke oke, ya bụ, ọ na-erepịa ọtụtụ CPU, RAM ma ọ bụ HDD egoAgbanyeghị, maka ndị ọrụ ahụ na-achọ mgbe niile ịnwe ihe oriri na kọmputa ha opekata mpe, ọ dị mma ịkọwa nke ahụ Inbụrụ nwere ike ime ka ha rie ụfọdụ oke ọnụ ahịa ha, ọkachasị mgbe ejiri ya, ebe ọ bụ na izu ike, n'ezie a na-anabata nnabata ego ya.
N'ihi ya, adighi akwado ya ka iji ya ma oburu na odi nkpa komputa ma ọ bụ ịchọrọ ịme ihe kachasị nke%% nke kọmputa anyị na mpaghara ndị ọzọ ma ọ bụ ọrụ.
1 Arụpụtaghị na GNU / Linux: Learningmụta iji Cerebro
1.1 Mbido mbụ nke Brain
1.2 Ndị ọzọ
1.3 Ayszọ nke akwụkwọ mpịakọta
1.4 Uzo mkpirisi kiiboodu (HotKeys)
1.4.1 C isi
1.4.2 E igodo
1.4.3 M igodo
1.4.4 O igodo
1.4.5 P igodo
1.4.6 Q isi
1.4.7 R igodo
1.4.8 S igodo
1.4.9 T igodo
1.4.10 U igodo
1.4.11 V isi
1.4.12 Igodo nke 1 ruo 9 na Igodo »*«
1.4.13 Igodo »+» and »-«
1.4.14 Igodo "Aro"
1.6 Ihe nrịba ama
Arụpụtaghị na GNU / Linux: Learningmụta iji Cerebro
Mbido mbụ nke Brain
Nhazi mbu na nke di nkpa nke Cerebro ọ dị ezigbo mkpa. ya nhazi windo Juda ruo na usoro ndị a:
Igodo Nweta Direct (HotKey): N’akụkụ a ngwa ahụ na-enye gị ohere ịhazi nchikota igodo dị mkpa iji mee ka ngwa ahụ rụọ ọrụ na-enweghị mkpa oke (oke). Site na ndabara, a na-ahazi nchikota isi «Ctrl+Space». Mana ọ na-enye ya ohere ịgbanwe ma ọ bụrụ na anyị dabere n’elu igbe ederede wee pịa igodo ahụ «Ctrl» na-ahapụghị ya, anyị pịa igodo nke abụọ iji dochie (dochie) igodo ahụ «Space».
Obodo (Obodo): Na nkebi a anyị nwere ike igosi Cerebro mba anyị ugbu a, ka oge na-aga, ọ nwere ike iji ozi ahụ iji hazie ma ọ bụ bulie data iji nye anyị. Dịka ọmụmaatụ, yana a ngwa mgbakwunye (plugins) de ihu igwe) nye anyị nkọwa akọwapụtara nke ọma.
Okwu: N’akụkụ a, a na-ahapụ anyị ịhọrọ otu Isiokwu ka ịgbanwee akụkụ nke anya nke eserese eserese nke ngwa ahụ. Ma n'ezie, weta isiokwu «Dark», nke ọtụtụ mmadụ na-enwekarị ekele maka ya.
Nhọrọ dị iche iche: Na njedebe nke nhazi windo, a na-egosi anyị ọtụtụ usoro akpọrọ:
Mepee nbanye: Iji gwa ngwa ka Ibu Ibu mgbe sistemụ na-amalite na onye ọrụ na-abanye n'ime ya. A gbanyere nhọrọ a na ndabara.
Gosi na ogwe menu: Iji gwa ngwa na-egosi na akara ngosi nke ya, na ọrụ mmanya n'elu ngosi ebe nke na-eji Desktọpụ Environment. A gbanyere nhọrọ a na ndabara.
Ọnọdụ Mmepụta: Nke a bụ nhọrọ dị elu nke ndị raara onwe ha nye iji mebie ngwa ahụ, ya mere, a naghị arụ ọrụ a na ndabara, ọ naghị atụ aro ka ị rụọ ọrụ ọ gwụla ma ị bụ onye ọrụ dị elu.
Nsonaazụ dị ọcha na zoo: Nke a nhọrọ na-agwa ngwa ihichapụ anyị searches na ndabere arụmọrụ oge ọ bụla ọ na-restart. A gbanyere nhọrọ a na ndabara.
Zipu ọnụ ọgụgụ na-enweghị aha - chọrọ ịmalitegharị: Nke a bụ nhọrọ iji nye ohere izipu ozi gbasara iji ngwa ahụ ndị ọrụ ya iji ya, iji meziwanye ya. Nhọrọ a anaghị arụ ọrụ na ndabara.
Zipu mkpesa mbibi akpaka - chọrọ ịmalitegharịa: Nke a dị iji mee ka izipu ozi gbasara njehie nke ngwa ahụ ndị mmepe ya iji ya, iji meziwanye ya. A gbanyere nhọrọ a na ndabara.
Ayszọ nke akwụkwọ mpịakọta
Tụkwasị na nke ahụ, ojiji nke òké (òké) ịkwaga na ngwa ahụ, ọ na-enye ohere iji keyboard emegharị n'ime ya. Igodo ndokwa maka nke a bụ ihe ndị a:
Akụkụ ntụziaka n'akụkụ « <- -> » y « ctrl + j/k » na-eji iji họrọ ihe na-esote ma ọ bụ gara aga ihe.
Igodo « enter » na leta « o » eji wee họrọ ihe.
Igodo « escape » ma ọ bụ aka ekpe « <- » a na-eji ha emegharị nhọrọ ahụ na ndepụta nsonaazụ isi.
Uzo mkpirisi kiiboodu (HotKeys)
Ntọala Brain (Lee nhazi)
Versiondị Brain (Lee nọmba nọmba)
Efu ahihia (Wepụ ihe mkpofu)
Ọpụpụ Brain (Mechie ngwa)
Gbanyụọ (Gbanyụọ olu kọmputa)
WiFi Gbanyụọ (Gbanyụọ ngwaọrụ WiFi nke kọmputa ahụ)
Gbanyụọ WiFi (Gbanyụọ ngwaọrụ WiFi nke kọmputa ahụ)
Jikwaa plugins (Jikwaa Brains plugins)
Brain Kwụsị (Wepu ngwa site na imechi ya)
Akwajuru (Bugharịa ngwa)
ụra (Kwado ọrụ kọmputa hibernate)
Mechie (Kwado ọrụ mmechi kọmputa)
Ghari (Gbanwee olu kọmputa)
Igodo nke 1 ruo 9 na Igodo »*«
nchapụta (Ihuenyo nchapụta ihuenyo)
Igodo »+» and »-«
Mpịakọta (Kọmputa olu larịị)
Ikpeazụ iwu gburu (Iwu ikpeazu gburu)
Maka ugbu a, Inbụrụ nwere ihe ndị a plugins dị, nke anyị ga-ekwu ma emechaa na iji kwado ọrụ ha na itinye ya n'ọrụ, na-akwado ndị arụpụta ihe nke ndị ọrụ ya niile, n'agbanyeghị sistemụ arụmọrụ eji.
Ihe nrịba ama
Onwe m, echere m na ọ ga-aka mma karịa Inbụrụ kwesịrị ịkwalite ihe ndị a ka mma ojiji:
Kwe ka ị gbanwee windo nhazi ahụ.
Ka sere n'elu search mmanya n'ọdụ ụgbọ mmiri na Desktọpụ.
Chọọ ntụgharị asụsụ ya n’ọtụtụ asụsụ, ọkachasị Spanish.
Gbalịa ka gị na nsụgharị GNU / Linux nke oge a nwee mmekọrịta.
Mee ka imelite oge niile, ọ bụghị naanị ilekwasị anya na mgbakwunye agbakwunye agbakwunyere.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Cerebro», nke abụọ nke onye edemede m na nke atọ na Blog, kwado ojiji na mmegharị nke ngwa ahụ na ndị ọrụ ahụ nwere oke ọkụ iji bulie arụmọrụ ha na kọmputa ha, yabụ, bụrụ nke ukwu mmasị na ịba uru, Maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Arụpụtaghị ihe kacha: Otu esi eji ngwa Brain eme ihe omimi?
N'ime ngwa nke ụdị a, ahọrọ m 'Albert'.
Daalụ maka okwu gị na aro gị. Ana m anwale 'Albert' ma ọ dị ezigbo mma. Aga m eme ederede banyere ya n'oge na-adịghị anya.
Maka ugbu a, m ga - eme nke atọ na nke ikpeazụ na Cerebro, ọkachasị maka njikwa ụfọdụ mgbakwunye bara uru (plugins) na ọ ga - abawanye arụmọrụ ya.
M na-eji ụbụrụ arụ ọrụ ruo ogologo oge ruo mgbe ọ malitere inye m nsogbu, ọ bụkwa na mmezi ya / mmepe ya yiri ka ọ na-ada; Ewelitebeghị ya kemgbe 2017. Version 3.1 rụụrụ m ọrụ mana 3.2 emeghị. N'aka nke ọzọ, ọ dị Alber ka mma na nke ahụ.
Maka ugbu a, ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike ịgụ nke atọ na nke ikpeazụ na Cerebro, ọkachasị na njikwa nke ụfọdụ tinye-ons (plugins) bara uru nke ukwuu na ọ ga-abawanye ọrụ ya: https://blog.desdelinux.net/complementos-cerebro-plugins-aumentar-productividad/
Devuan 3.0 Beowulf rutere na Debian 10.4 base, Kernel 4.19 na ndị ọzọ